June 2021 - Myanmar Man United.
ရာသီသစ်မှာ ကျောနံပါတ် ၉ ပိုင်ရှင်သစ်ဘယ်သူဖြစ်မလဲ..? ဟယ်ရီကိန်းလား ဟာလန်းလား…?
htet htet | 30/06/2021
ရာသီသစ်မှာ ကျောနံပါတ် ၉ ပိုင်ရှင်သစ်ဘယ်သူဖြစ်မလဲ..? ဟယ်ရီကိန်းလား ဟာလန်းလား…? ယူနိုက်တဒ် ရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရွေ့တွေနဲ့အတူ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသလို ဒီလိုပြောင်းလဲခြင်း ရေချိန်မှာ မာစီရယ် အနေနဲ့ လိုက်မှီဖို့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ ပြင်သစ် ရဲ့နာမည်ကျော်သတင်းထောက်ကြီး လောရန့်စ်ဂျူလီယာက ဆိုပါတယ်။ လောရန်စ့် ဟာ ပြင်သစ် နိုင်ငံရဲ့ထင်ကရ သတင်းထောက်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အပြောင်းရွှေ့တွေနဲ့ ပြင်သစ်သားတွေရဲ့သတင်းအပေါ်
ရော်နယ်ဒိုကို တွေ့ဖူးသမျှ ကစားသမားတွေထဲမှာ ဘောလုံးဦးနှောက် အကောင်းဆုံးလို့ ချီးကျူလိုက်တဲ့ မန်ယူအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း
htet htet | 29/06/2021
ရော်နယ်ဒိုကို တွေ့ဖူးသမျှ ကစားသမားတွေထဲမှာ ဘောလုံးဦးနှောက် အကောင်းဆုံးလို့ ချီးကျူလိုက်တဲ့ မန်ယူအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း မန်ယူအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရွိုင်းကိန်းက ဘယ်ဂျီယမ်အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော်လည်း ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်ဒိုကို ချီးကျူးခဲ့သည်။ ရော်နယ်ဒိုသည် သူတွေ့ဖူးသမျှ ကစားသမားများအနက် ဘောလုံးဦးနှောက်အကောင်းဆုံး ကစားသမားဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရော်နယ်ဒိုသည် ၂၀၀၃ မှ ၂၀၀၆ အထိ ရွိုင်းကိန်းနှင့်အတူ အိုးထရက်ဖို့တွင် ကစားခဲ့သည်။
သရဲနီသစ်ဖြစ်လာတော့မယ့် ဆန်ချိုနဲ့ ယူနိုက်တက် Key Player တွေရဲ့ ( ၂၀၂၀ /၂၁ ) ရာသီမှ စွမ်းဆောင်ရည်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
သရဲနီသစ်ဖြစ်လာတော့မယ့် ဆန်ချိုနဲ့ ယူနိုက်တက် Key Player တွေရဲ့ ( ၂၀၂၀ /၂၁ ) ရာသီမှ စွမ်းဆောင်ရည်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း အာလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း ဂျေဒန်ဆန်ချိုက ယူနိုက်တက်ကို ရောက်ရှိဖို့ အတော်လေးနီးစပ်နေပါပြီ။ ဂျာမနီသတင်းစာ Ruhr Nachrichten က အဆိုပါ အပြောင်းအရွေ့ဟာ အပြီးသတ်လုနီးပါးအခြေအနေကို ရောက်ရှိနေပြီလို့ မနေ့ညက ဆိုပါတယ်။
နာမည်ကျော် စပိန်သတင်းစာ AS က ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ယူရို-၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ အုပ်စုအဆင့် အကောင်းဆုံးကစားသမား(၁၁)ဦး
htet htet | 25/06/2021
ဆုဖလားတွေကို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ ယူနိုက်တက်တို့ မဖြစ်မနေခေါ်ယူရမယ့် ကစားသမားကို ပြောလာခဲ့တဲ့ သရဲနီဟောင်း ဆာဟာ
htet htet | 23/06/2021
ဆုဖလားတွေကို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ ယူနိုက်တက်တို့ မဖြစ်မနေခေါ်ယူရမယ့် ကစားသမားကို ပြောလာခဲ့တဲ့ သရဲနီဟောင်း ဆာဟာ ချဲလ်ဆီးအသင်းသည် စပိန်အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရာမို့စ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါက ဆုဖလား အများအပြား ရရှိလာနိုင်ကြောင်း မန်ယူတိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဆာဟာက ပြောဆိုလိုက်သည်။ ချဲလ်ဆီးသည် ဝါရင့်နောက်ခံလူ သီယာဂိုဆေးဗားကို တစ်နှစ်စာချုပ် သက်တမ်းတိုးထားသော်လည်း ဗဟိုခံစစ်မှူးတစ်ဦး အားဖြည့်ရန် ရှာဖွေနေသည်။ ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းမှ ဗာရာနီကိုခေါ်ယူရန်
ဆန်ချိုကို ဒုတိယဆန်းချက်ဇ် မဖြစ်စေဖို့ ယူနိုက်တက်တို့ ဂရုပြုရမည့် အချက်
htet htet | 22/06/2021
ဆန်ချိုကို ဒုတိယဆန်းချက်ဇ် မဖြစ်စေဖို့ ယူနိုက်တက်တို့ ဂရုပြုရမည့် အချက် ယခုနှစ်နွေရာသီတွင် ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူရေး အောင်မြင်ခဲ့ပါက ဆန်ချိုသည် မန်ယူတွင် လစာငွေအများဆုံး ရရှိသည့် ကစားသမားဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထိုအခါတွင် ဆန်ချိုကြောင့် မန်ယူအသင်းသားများအကြား သဘောထား ကွဲလွဲစရာဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြသည်။ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ဆန်ချိုသည် ယခုနှစ် နွေရာသီတွင် မန်ယူသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်
မန်စီးတီး၊ ပီအက်စ်ဂျီတို့ထက် အောင်မြင်မှုနဲ့ သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ ယူနိုက်တက်က သူ့ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ ရာမို့စ်
မန်စီးတီး၊ ပီအက်စ်ဂျီတို့ထက် အောင်မြင်မှုနဲ့ သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ ယူနိုက်တက်က သူ့ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ ရာမို့စ် ၁၆ နှစ်ကြာကစားခဲ့တဲ့ ရီးရဲလ်အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ရာမို့စ်ကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ အသင်းတွေထဲမှာ မန်ချက်စတာမြို့ခံနှစ်သင်းနဲ့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းတို့ပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်၃၄နှစ်အရွယ်စပိန်နောက်ခံကစားသမားဟာ စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာလည်းရွေးချယ်ခြင်းမခံရတာကြောင့် အခုနွေရာသီမှာ အနားရထားသူလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ ရာမိုစ့်ကို ရီးရဲယ်အသင်းက လစာလျှော့ချပြီးတစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးချုပ်ဆိုဖို့ညှိနှိုင်းနေပေမယ်ကစားသမားဘက်ကလက်မခံဘဲအသင်းကနေထွက်ခွါဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ ရာမိုစ့်ကိုခေါ်ယူဖို့ဥရောပထိပ်တန်းအသင်းအတော်များများကစိတ်ဝင်စားနေပြီးသူ့ရဲ့မြင့်မားတဲ့လစာကြောင့် လက်တွန့်နေကြတာပါ။ အသက်
ယူနိုက်တက်ရဲ့ ယခုနွေရာသီ အဓိကပစ်မှတ်ကို ကြားဖြတ်ခေါ်ယူဖို့ ဆန္ဒရှိနေတဲ့ ရီးရဲမက်ဒရစ်
ယူနိုက်တက်ရဲ့ ယခုနွေရာသီ အဓိကပစ်မှတ်ကို ကြားဖြတ်ခေါ်ယူဖို့ ဆန္ဒရှိနေတဲ့ ရီးရဲမက်ဒရစ် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းက ဘိုရပ်ရှား ဒေါ့မွန် တောင်ပံကစားသမား ဂျေဒန်ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အလားအလာကောင်းနေပေမယ့် မကြာသေးမီက ရရှိတဲ့ သတင်းတွေအရ ရီးရဲမက်ဒရစ်က သရဲနီတို့ရဲ့ နံပါတ် ( ၁ ) ပစ်မှတ်ကစားသမားကို ကြားဖြတ်ခေါ်ယူဖို့ စီစဉ်လာနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Don
အားနည်းနေတဲ့ ညာခြမ်းခံစစ်အတွက် ထရစ်ပီယာကို မရခဲ့ပါက Plan B အနေနဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ ခေါ်ယူမယ့် လူငယ်ကြယ်ပွင့် ကစားသမား
htet htet | 21/06/2021
အားနည်းနေတဲ့ ညာခြမ်းခံစစ်အတွက် ထရစ်ပီယာကို မရခဲ့ပါက Plan B အနေနဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ ခေါ်ယူမယ့် လူငယ်ကြယ်ပွင့် ကစားသမား မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ဟာ လာမယ့်ဘောလုံးရာသီ ကစားသမား အင်အား ဖြည့်တင်းဖို့အတွက် တိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့ ခံစစ်ပိုင်းကို ဦးစားပေးပြင်ဆင် နေတာပါ။ လက်ရှိအသင်းရဲ့ကစားကွက်အခင်းအကျင်း အရ ညာနောက်ခံနေရာမှာ ခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့ ဘစ်ဆာကာကို ဖိအားပေးဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့
ဆုဖလားတွေကို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ ‌အထောင်တိုက်စစ်မှုးနေရာအတွက် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် တိုက်စစ်မှုးကို ချိတ်ဆက်နေတဲ့ ယူနိုက်တက် စပိန်ကလာတဲ့ သတင်းတွေအရ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ရီးရဲမက်ဒရစ်ကနေ ပြန်လည်ရောင်းထုတ်လိုနေတဲ့ ဆာဗီလားကြယ်ပွင့် တိုက်စစ်မှုး လူကာဂျိုဗစ်ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းတွေထဲ ပါဝင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ နေရာ တော်တော်များများကို အင်အားဖြည့်ဆီးလိုနေပြီး အထောင်တိုက်စစ်နေရာအတွက် ကာဗာနီကို စာချုပ်သက်တမ်းတိုးထားပေမယ့်လည်း နောက်ထပ်တိုက်စစ်မှုးတဦးကို